Somali News 05.13.21 | KWIT
Si kastaba ha noqotee, Reynolds ayaa sheegaysa in loo-shaqeeyayaasha looga baahan yahay inay sare u qaadaan oo ay bixiyaan wax badan si ay u soo jiitaan shaqaalaha. Waxay sidoo kale intaa ku dartay in "noloshu caadi ku soo noqoneyso" kiisaska COVID-19 ee ugu hooseeya 10-bilood.
Guddoomiyaha gobolka South Dakota Kristi Noem ayaa sheegay in gobolku uusan muddo dheer ka qeyb qaadan doonin barnaamijka shaqo la'aanta federaalka sidoo kale. Faa'iidooyinka dheeraadka ah waxay ku egyihiin Koonfurta Dakota markay tahay 26-ka Juun iyo Iowa 12-ka Juun.
Waaxda Caafimaadka ee Dakota Dakota ayaa sheegtay in gobolku ka gudbay 50% marinkii loogu talagalay tirada dadka waaweyn ee deegaanka ee si buuxda uga tallaalaya COVID-19.
Xoghayaha Caafimaadka ee Dawladdu wuxuu leeyahay tallaalku waa amni waana habka ugu dhakhsaha badan ee looga baxo cudurkan faafa.
Bandhigii muusikada xagaaga ee ugu weynaa Siouxland ayaa soo laabtay ka dib markii COVID-19 lagu qasbay in la joojiyo dabaaldeggii sannadlaha ahaa ee 30aad ee sanadkii hore.
Sabtida Beerta ayaa hadda ka dhici doonta laba maalmood, Julaay 2deeda iyo 3deeda Grandview Park. Madaxa habeenka jimcaha indie-pop trio, AJR, iyo habeenka sabtida John Fogerty.